Akụkọ - Mgbe ị na-eji igwe na-arụ ọrụ maka ịmịpụta ihe, a ga-akwụrịrị slitting usoro anya na agaghị ele ya anya.
Mgbe ị na-eji igwe na-emepụta ihe maka imepụta ihe, a ghaghị ị processa ntị na slitting usoro a ga-etinye anya na ya. Ya mere, edemede a ga - ejikọ ihe nkiri a na - akpọkọtara ọnụ BOPP / LDPE nke mejupụtara, nsogbu ọfụma na - eme na slitting production system yana nsogbu ndị metụtara igwe na - agbada iji nyochaa.
1. Jikwaa ọnwụ ọnwụ
Mgbe ị na-abanye na mmepụta nke ọma, ọsọ nke igwe na-agbaji kwesịrị ịgbaso usoro chọrọ. Oke elu ga-emetụtakwa ịcha mma. Ya mere, site na ịchịkwa ọsọ ọsọ, enwere ike ịnweta àgwà achọrọ maka slitting. N'ihi na, na mmepụta, ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ọsọ ọsọ ọsọ iji bulie mmepụta ma melite uru akụ na ụba ha. Nke a ga - eme ka ihe onyonyo a bụrụ ihe na - aga n’itolite ogologo oge yana nsogbu ogo dị iche iche n’arụghị ọsọ ọsọ.
2. Họrọ usoro ịgbawa nke dabara adaba dịka akụrụngwa na arụmọrụ ihe nkiri
Na mmepụta nke ọma, ọ dị mkpa ịnabata teknụzụ nkewa maka mmepụta dị ka arụmọrụ akụrụngwa si dị, ihe njiri mara ihe nkiri ahụ, na ụdị dị iche iche na nkọwapụta nke ihe nkiri ahụ. N'ihi na usoro usoro, usoro njirimara, na ụkpụrụ nke ihe nkiri slit dị iche iche dị iche, a ga-eji nlezianya dozie usoro maka ngwaahịa ọ bụla.
3. Lezienụ anya maka nhọrọ ziri ezi nke ebe ọrụ
Na mmepụta, ugboro ojiji nke ọdụ ọ bụla nke slitter dị iche, yabụ ogo nke ejiji dịkwa iche. Ya mere, a ga - enwe ụfọdụ iche na arụmọrụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọnya dị ole na ole maka ịkpụchasị ngwaahịa n'ọnọdụ ka mma. N'aka ozo, enwere otutu uzo di ogologo. Yabụ, onye ọrụ ọ bụla ga-ege ntị na nhọrọ ziri ezi nke ebe ọrụ, nye egwu zuru oke na steeti kacha mma nke ngwa ahụ, ghọta ojiji ojiji saịtị ahụ, chịkọta ahụmịhe oge niile, wee chọta ojiji nke njirimara kacha mma nke akụrụngwa ahụ.
4. Gbaa mbọ hụ na ịdị ọcha nke ihe nkiri
Na mgbakwunye, ekwesiri ighota na n'oge usoro nkpa, a na-emepe ihe nkiri mpịakọta ọ bụla wee weghachite, nke na-eme ka ọnọdụ maka ntinye nke ihe ndị mba ọzọ. Ebe ọ bụ na a na-ejikarị ngwaahịa ihe nkiri eme ihe maka ịpị nri na ọgwụ, ya mere, usoro ịdị ọcha dị oke mkpa, yabụ ọ dị mkpa iji hụ na mpịakọta nke ihe nkiri ọ bụla dị ọcha.